Las Hurdes, သဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုနှင့်ကောင်းသောအစာအိမ်မြေ။ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | Espana, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Las Hurdes ပြည်နယ်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် Cáceres၏အပေါ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ် Salamanca။ ဒါဟာအနည်းကိန်းနှင့်ပြည့်စုံဒေသတစ်ခုဖြစ်သည် သဘာဝအလှအပ အတိအကျဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ orography ကြောင့်ရာစုနှစ်များစွာအထီးကျန်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဆက်သွယ်မှုအသစ်များသည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများနှင့်ထူးခြားသောထူးခြားသောလက္ခဏာများကြောင့်၎င်းကိုခရီးသွား into ည့်သည်များနှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်က ဂါတာနှင့်ပြင်သစ်တောင်တန်းများအဖြစ်၏ဒေသအဖြစ် ဂရန်းဒီးလာ၏မြေများ, Las Hurdes သင့်ကိုကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Extremadura ဒေသကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 Las Hurdes မှာကြည့်ဖို့ဘာ
1.2 Gasco မီးတောင်
1.4 အဆိုပါ Meancera ၏ဂျက်လေယာဉ်
3 Las Hurdes မှာဘာစားရမလဲ
4 Las Hurdes ဘယ်လိုသွားရမလဲ
Las Hurdes မှာကြည့်ဖို့ဘာ
အကယ်၍ ဤဒေသသည်တစ်စုံတစ်ရာကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုပင်သဘာဝareasရိယာ၏လှပသောအလှတရားကြောင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျခမ်းနားသောလမ်းကြောင်းများလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသိရန်ရနိုင်သည် တောင်တက်သမား နှင့်သူတို့တွင်အောက်ပါထင်ရှား။
Las Hurdes ကိုဖြတ်ကျော်စီးဆင်းသောမြစ်အချို့သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောလမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Gasco ရှုထောင့် သင် Malvellido မြစ်ဖန်တီးသောအကွေ့အကောက်များသောတွေ့နိုင်ပါသည်။ အလားတူပဲသင်ချဉ်းကပ်လျှင် la Antigua ၏ရှုထောငျ့, မြို့အနီး Ríomalo de Abajoမင်းမှာရှိလား Melero meanderစပိန်နိုင်ငံတွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Las Hurdes တွင်အသိသာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကြာမြင့်သည်ဟုယူဆရသောမီးတောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းဖော်ပြသည်ပါပြီ ဥက္ကာခဲကျသည်။ လက်ရှိဖြစ်သည် သိပ္ပံဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား၏ပိုင်ဆိုင်မှု ၎င်းသည်လှပသောသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ Holm သပိတ်နှင့်စတော်ဘယ်ရီပင်တို့နှင့်အတူရှိ၏။
Las Hurdes တွင်လည်းပေါများသည် သဘာဝရေကန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများကိုခံစားကြည့်ရှုရင်းရေချိုးနိုင်သည်။ ဤသည်မြို့အနီးရှိ Charco de la Olla ၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည် အုတ်နှင့် Las Mestas ရေကန်ပြီးခဲ့သည့်တ ဦး တည်းမှလာမယ့်။
အဆိုပါ Meancera ၏ဂျက်လေယာဉ်
အထက်ဖော်ပြပါ Malvellido မြစ်မှသစ်သီးခြံများနှင့်ချယ်ရီပင်များမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်၍ Chorro de la Meancera, ထိုအမည်တူမြစ်၏inရိယာ၌အံ့မခန်းရေတံခွန်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အလွန်ဆင်တူနှင့်အညီအမျှအဖိုးတန်သည် Chorrituelo de Ovejuela, သောအံ့သြဖွယ်သဘာဝရေကူးကန်သို့ကျရောက်ပါတယ်။
လာ့စ်ဟားဒက်စ်၏နောက်ထပ်သိချင်စိတ်တစ်ခုမှာ petroglyphs ဒေသ၏နေရာများစွာတွင်တည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ Neolithic။ အရေးအကြီးဆုံးသိုက်အချို့သည် Las Eríasမှတစ်ခု, အယ်လ် Riscal ကနေတ ဦး တည်း, El Tesito de los Cuchillos မှတစ်ခု o Las Herraduras နှင့်အတူတ၏မြှို့နယ်အတွက်ထိုသူအပေါင်းတို့သည် Pinofranqueado.
Las Hurdes ၏ဒေသအပေါ်အခြေခံပြီးထူးခြားတဲ့ဗိသုကာရှိပါတယ် ကျောက်တုံး ကြောင်းinရိယာ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ သူတို့၏အိမ်များ၏နံရံများနှင့်ခေါင်မိုးများကိုဤကျောက်တုံးဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးရှုခင်းကိုထူးခြားသောလေကိုပေးသည်။ ဤတည်ဆောက်ပုံသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီ (ရောမခေတ်မတိုင်မီကယုံကြည်သည်) နှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ကျောက်တံတား စပိန်အနောက်မြောက်ကနေ။
သူတို့တွင်ထင်ရှားသည် Morisco လမ်း, အထက်ဖော်ပြပါ Melero meander အနီးနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်မှုပညာစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ။ သင်တို့သည်လည်းပိုမိုနီးကပ်စွာရသင့်တယ် အုတ်, ဒေသ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်တောင်ကုန်းပေါ်တွင်လဲလျောင်း Casares က de Las Hurdes၎င်း၏ဒရမ်သမားလူသိများ။
သို့သော်interestingရာမရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလယ်ယာသုံးခြံရှိသည်။ Palomero ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား ၎င်းတွင်ဂျူးရပ်ကွက်ဟောင်းရှိပြီးတရားဇရပ်များပင်ရှိသည် သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဘုရားနှင့်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအသင်းတော်နှစ်မျိုးစလုံးကို ၁၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
En Pinofranqueadoငါတို့ဖော်ပြပြီးသော petroglyphs အပြင်သင်၌လည်းရှိသည် အန်cina၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း, ဆယ်ခုနစ်ရာစုအတွင်းနှင့်ဆယ်ရှစ်နှစ်ကနေအဓိကယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်အတူတည်ဆောက်အဖြစ် Cristo de la Salud ၏ Hermitageတစ်ချိန်တည်းမှစ။ ထို့အပြင်၊ သြဂုတ်လ၏နောက်ဆုံးစနေ၊ တနင်္ဂနွေသို့သင်မြို့ကိုလည်ပတ်ပါကသင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါသည် အဆိုပါEnramá, ဒေသတွင်းခရီးသွားအကျိုးစီးပွား၏ပွဲတော်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတွက် နာနို မီးမောင်းထိုးပြ အဆိုပါယူဆချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း။ ထို့အပြင်ဤfromရိယာကနေ အဆိုပါက Black Stork ၏တောင်တက်လမ်းကြောင်းBatuequilla ချိုင့်ဝှမ်းကို ဖြတ်၍ ထိုငှက်များကိုလေ့လာနိုင်သည်
လာ့စ်ဟားဒက်စ်၏အခြားထူးခြားမှုမှာလောကအထီးကျန်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်၎င်း၏ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ကိုယ်ပိုင်စကားပင်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ အစွန်းရောက်။ ပို။ ပင်စပ်စုဒီဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် ကျောက်စိမ်း။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်စာရေးဆရာများ၏ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာစာပေများရှိသည် Clara Jara က de Soto, XNUMX ရာစုကနေနှင့် ဟိုဆေးမာရီယာ Gabriel နှင့်Galán, XX ၏။
Las Hurdes မှာဘာစားရမလဲ
Las Hurdes ၏ gastronomic ရတနာနှစ်ခုရှိပါတယ် ပျားရည် y ဆိတ်ကလေး။ ပန်း ၀ တ်မှုန်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်မှူးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ဒေသပြင်ပ၌ပင်ကျော်ကြားမှုရရှိခဲ့သည်။
သင်ကြိုးစားသင့်သောနောက်ထပ်ပုံမှန်ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည် သံပုရာသုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Citrus သစ်သီးတွေ၊ ကြက်ဥကြော်တွေ၊ လည်းရှိပါတယ် အာလူး wiggle သို့မဟုတ်သင်အသက်ရှူပါလိမ့်မည်; က rebujones သို့မဟုတ်သိုးနှင့်အတူကျပ်သိုးသငယ်ကို tripe နှင့် ဆာလောင်မွတ်သိပ်လူသတ်သမားတစ်တုံး goodie ။ သင်တို့သည်လည်းအရသာနိုင်ပါတယ် ဆရာနို့၌သစ်အယ်သီးနေသော။
မြစ်ကဲ့သို့ငါးများကဲ့သို့ပင်ထင်ရှားသည် အဆိုပါရောက်ရေချိုငါး, barbels o တဲများ။ တခါတရံ စိုစွတ်သောငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်တွဲဖက်ပြီးပေါင်မုန့်အခြေအနေများရှိသည်။
အချိုပွဲအတွက်သင့်တွင်အကောင်းဆုံးသောမုန့်ချိုင့်ရှိသည် Buns ကြော်, သမီး, ချည်, ပန်း, ပြွတ် o fritters။ ပြီးတော့သောက်ဖို့သင့်မှာဝိုင်ကောင်းကောင်းရှိပေမယ့်ထမင်းကိုအရသာရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ် ပျားရည်ဘရန်ဒီ.
Las Hurdes ဘယ်လိုသွားရမလဲ
Extremadura ဒေသကိုရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက အဝေးပြေးလမ်းဘတ်စ်ကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသင် အသုံးပြု၍ မြောက်မှလာလျှင် Ruta de la Plata ဟုလူသိများသော A-66 ဖြင့်သင်ရောက်ရှိမည်။ ဒီဟာကို La Granja / Zarza de Granadilla ရဲ့ထွက်ပေါက်မှာထားရမယ်။ Gabriel နဲ့Galánရေလှောင်ကန်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ Palomero ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြား.
သင်တောင်ဘက်မှလာလျှင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် A-66 တူညီသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီအမှု၌, ၏အမြင့်မှာ Plasencia, သင်ခေါ်ဆောင်သွားမည့် EX-370 ကိုပိတ်ထားရမည် Pinofranqueado။ နောက်ဆုံးသင်မက်ဒရစ်မြို့မှခရီးထွက်လျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ NV ဖြစ်သည်။ Navalmoral de la Mata ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် EX-A1 ​​ကိုပိတ်ပြီး၊ Ex-204.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Las Hurdes သည်ယနေ့သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်များစွာရှိသည်။ ဒါဟာသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှု, အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်တစ် ဦး လက်ရာမြောက်သော gastronomy ရှိပါတယ်။ ဒါဟာပုံဖော်သောနောက်ပြန်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဒေသနှင့်ဘာမှမရှိပါ Buñuel မိမိအမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်၌တည်၏ 'Las Hurdes၊ မုန့်မပါသောမြေ'.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Las Hurdes